ညီလင်းသစ်: ကျွန်းကလေးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ
Posted by ညီလင်းသစ် au 14.3.13
Yes.. here we go..!! :D
မျှော်တုန်းမျှော်ဆဲ... သူလည်း ရောက်လာ... :D
အတူဆုံပြီး အပြုံးတွေ နှုတ်ဆက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် ကြည်နူးစွာနဲ့ ၀မ်းသာမိပါတယ်... အစ်ကို။
Yeah, safety factor and greenery factor is the only thing to live in Singapore. I feel understand how you feel at the first day and pic are nice too.
ကိုညီလင်းသစ်တော့ ဘယ်လိုနေခဲ့မယ် မသိဘူး။ ဖတ်ရတဲ့သူတောင် ကြည်နူးမိတယ်း)
နောက်အပိုင်းတွေ မျှော်နေတယ် ကိုညီရေ..၅နှစ်ကြာ စိတ်ကူးယဉ်ထားတယ့် ခရီးဆိုတော့ ပျော်နေမှာပဲ..စင်္ကာပူကို လွမ်းတယ်..
ဘလာဂေါ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်း ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်း))))
လေယာဉ်ကွင်းတွေ၊ ရှုခင်းတွေပဲ မြင်နေရတော့မှာလားကွယ်
ကျွန်းသူ ကျွန်းသားတွေနဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ စီဝေပေါင်းစည်းတဲ့ အချိန်ကလေးတွေ၊ ပုံရိပ်တွေ
သြော်...နောက်တစ်ပုဒ်ပေါ့ ဟုတ်..စ :P
ဘာလို့ အကြာကြီး တိတ်နေခဲ့လဲ..ခုတော့ ရိပ်မိပြီ။
သူယောင်မယ်လေးတွေ အပြုံးမှာ ဖေဇော်ဂျီ မေ့မူးသွားတယ်ထင်ပါ့...။ :) :)
ခြင်္သေ့ကျွန်းကလေးကို ကိုညီလင်းသစ်ရေးချပြမှပဲ တော်တော်ကလေးကို သာယာကြည်နူး နေချင့်စဖွယ် မြို့ကလေးတစ်မြို့ဖြစ်သွားတော့တယ်...။ အိုခေ နောက်တပို့စ်ကို ဆက်လိုက်ခဲ့ပါဦးမယ်..း)
ကျွန်းကလေးပေါ်မှာ နေဖူးသူမို့ မြင်ကွင်းတွေနဲ့အတူ ခြေချဖူးတာလေးတွေက အသစ်တွေ ပြန်ဖြစ်လာတယ်။
ဒီကနေ့ အညာခရီးကရောက်မဆိုက် ပို့စ်အသစ်လေး ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့ အပြုံးတွေ တစ်တောလုံးပွင့်တဲ့ဆီ ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်တာကလာက ကြိုးစားခဲ့ရသမျှ စိတ်ကူးလေး အကောင်အထည်ပေါ်သွားပြီမို့ ထပ်တူဝမ်းသာကြည်နူးမိတယ် မောင်ညီလင်းရေး)အရေးအသားလေးတွေနဲ့ ရိုက်ချက်တွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စံနစ်တကျနဲ့ ဖတ်ကောင်း ကြည့်လို့ကောင်းပေါ့။ ကျွန်းကလေးရဲ့ ရင်ခွင်မှာအိပ်ယာဝင်သွားပြီဆိုတော့ အိပ်ယာနိုးလာမဲ့ ဒုတိယပိုင်းကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် (ဘလော့ဂါတွေအခန်းကဏ္ဍပါလာတော့မှာမို့ :P)
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်လေးဖတ်လိုက်ရတာနဲ့တင် ငြိမ်း ကိုယ်တိုင် ကျွန်းကလေးရဲ့ရင်ခွင်ထဲရောက်သွား သလိုပါပဲ၊ မျှော်ရကျိုးနပ်ပါတယ်၊ အဖွင့်စကား က ဖတ်ရတာကြည်နူးဖို့ ကောင်းသလို ဦးဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့ ဓါတ်ပုံကလဲ ရင်ထဲကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားစေပါတယ်၊ ငြိမ်ငြိမ်လေး ဆက်လိုက်ခဲ့ပါ့မယ်။
fine city ပေမယ့် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာပါးနပ်မှု
ကြောင့် ရိုးရိုးသားသားခရီးသည်တွေအတွက် စိတ်အနှောက့်အယှက်မဖြစ်စေရပါဘူးအကိုရ... :)))
နောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာ အစ်ကိုနဲ့အတူ ကျွန်းလုံးပတ်လည် လိုက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်..... :)))))
စင်ကာပူရဲ့လူနေမှူ့စတိုင်လ်ကို မွန်းကျပ်တဲ့ညည်းညူသံတွေကြားမှာ ကိုညီ့စာလေးတွေနဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖတ်လိုက် ကြည့်လိုက်မိတာနဲ့ တကယ့်ကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ Fine City လေးတစ်ခုအဖြစ် စိတ်ကူးထဲမှာတင် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ်... တည်ငြိမ်တဲ့အရေးအသားနဲ့ ဖတ်တဲ့သူရဲ့ စိတ်ကိုဆွဲဆောင်သွားတာ တကယ်ပညာသားပါတယ်.... ဒါနဲ့ အမသူပြောသလို ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပေါင်းစည်းတွေ့ဆုံမှူ့လေးတွေကို နောက်တစ်ပုဒ်မှာ ကြည့်ရမြင်ရဖတ်ရမယ် ထင်ရဲ့လေ.... :)
နော်နော်(စလုံးမှ စာဖတ်ပရိတ်သတ်) said...
စောင့်ဖတ်နေတာ။ဂျုတီချိန်တွေနဲ့မို့ဖတ်လည်းဖတ်ရော တင်ပီးတာ 12hours ရှိသွားပြီ။လောကကြီးက ဘယ်လို နေနေ ခံစားတဲ့သူအပေါ်မူတည်ပြီး နှစ်သက်ကြည်နူးမှု၊စိတ်ညစ်ငြူးမှု ရသ အမျိုးမျိုးကွဲသွားတာပဲ။ချစ်စရာကောင်းအောင် ရေးတတ်တော့လည်း စာက ချစ်စရာကောင်းသွားတာပဲ။မအိမ်သူနဲ့ သားသားကတော့ ကိုညီ့ကို လွမ်းနေမလားပဲနော။ :)
ထုံးစံအတိုင်း သေသပ်လှပတဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့
တိကျစုံလင်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေဟာ ဟာကွက်မရှိအောင်ကို
အကို့ပို့စ်တွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ကို ရင်နဲ့ရင်းပြီး
အကိုက ပိုင်ဆိုင်ထားပြန်တယ်....အကိုရေ..ကျွန်းလေးဘယ်လောက်သေးသေး ဘယ်လောက်ဝေးဝေးးးးးးးးး
အပိုင်း၂ ကိုအပြေးလိုက်ခဲ့မယ် အကိုရာ...
နောက်ပို့စ်ကို ဖတ်ဖို့ရာ စိတ်စောနေမိတယ်...:)))
ခြင်္သေ့ကျွန်းလေးရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ပထမဆုံးအိပ်ရာဝင်တဲ့
ညဟာ အကို့အတွက် ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေ
(ကျနော်သတိထားမိတာက ခြင်္သေ့ကျွန်းကလေးရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုပါ၊ ည ၁၂ နာရီ၊ ၁ နာရီမှာလည်း မိန်းကလေးတွေ တစ်ယောက်ထဲ သွားနေတာ တွေ့ရတယ်၊ ဘယ်သူကမှ နှောင့်ယှက်ချင်တဲ့ အရိပ်အယောင်မျိုး မပြကြဘူး၊ အားလုံးက လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး....)
ကျန်သောအပိုင်းလေးတွေ စောင့်မျှော်နေပါတယ် (^.^)
အဟမ်းဟမ်း.. မနက်အိပ်ရာနိုးစ.... ကိုယ့်နှိုးစက်ကလေ နောက်ကျ.. :D
ဝမ်းသာ၊ ကြည်နူးရမှုဟာ ထပ်တူ၊ ထပ်မျှပါပဲ...၊
I hope I'd feel the same way as I did for next times and not only on the first day. :)
ဟုတ်ကဲ့..၊ ကျနော့်အတွက်လည်း ထပ်တူမရှိနိုင်ခဲ့သော နေ့ရက်များပါပဲ အစ်မရေ..၊း)
စင်္ကာပူကို လွမ်းတယ်ဆိုတာတော့ နည်းနည်းလေးမှ သံသယ မဖြစ်မိပါဘူး၊ ၆ ရက်တာပဲ နေခဲ့ရသူတောင် သတိရနေမိတာ ကလား...၊
ဒါရိုက်တာဝိုင်း ရိုက်ခဲ့တဲ့ ̔အဲ့ဒီ အခန်းဖြတ်̕ ဇတ်ကားလေးကို မဆီမဆိုင် သတိရနေတာ..၊းD
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...၊
နောက်တစ်ပုဒ်အတွက် အခုကတည်းက ကြိုပြီး ဂိုက်လိုင်း ချပေးထားတယ်ပေါ့..၊း) ကျနော်က နောက်ထပ် လေယာဉ်ကွင်းပုံ ၁၀ ပုံလောက် တင်မလို့ လုပ်နေတာ...၊
မြို့ကလေးက တကယ်ပဲ ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ ၆ ရက်လောက်ပဲ နေခဲ့ရသူ တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်မှာပေါ့လေ...၊း)
ရောက်ဖူး၊ သိဖူးထားပေမယ့် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လာဖတ်တာကို ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ...၊
အမြဲလိုလို မပျက်မကွက် လာအားပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော်..၊
ဟုတ်ကဲ့..၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ ရောက်သွားခဲ့လို့ ကျနော်လည်း ဝမ်းသာမိတယ် တီတင့်၊ တီတင့်လည်း ဘလော့ဂါတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခန်းကို စိတ်ဝင်စားနေတာပဲကိုး...၊း)
ကျနော်လည်း မအားလပ်တာနဲ့ ချက်ချင်း မရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လိုက်လည်မယ် ဆိုလို့လည်း ဝမ်းသာစွာနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..၊
အဲဒါတော့ အမှန်ပဲဗျ..၊ ကျနော် ဆုံခဲ့ရသူတွေက တကယ့်ကိုပဲ fine ဖြစ်ကြတယ်၊ အပေါင်း လက္ခဏာ fine ကို ပြောတာနော်..၊း))
ကျေးဇူးပါဗျာ..၊ ဆက်လည်း လိုက်ခဲ့ပါဦး...၊း)
နှစ်သက်တာ သိရလို့ ဝမ်းသာရပါတယ် ညီရေ၊ အင်း... ကျွန်းသားတွေနဲ့ ဆုံတွေ့မှုကို တောင်းဆိုသူတွေတော့ များသထက် များလာပြီ၊း) ထူးထူးခြားခြား ကွန်မန့်လေး ထားသွားလို့လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ..၊
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ၊ ဖြစ်ရပ် တော်တော်များများမှာ ကြည့်သူရဲ့ ရှုထောင့်ကိုလိုက်လို့ မြင်ကွင်းတွေကလည်း ကွာသွားတတ်ကြတာ များပါတယ်၊း) အလုပ်တာဝန်တွေ ကြားကနေ သတိတရနဲ့ စောင့်ဖတ်နေလို့လည်း ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော်...၊
ဆက်ပြီး တင်ပါ့မယ် ညီမရေ...၊
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ရာ ကွန်မန့်ရှည်ကြီးအတွက် တကယ့်ကို ကျေးဇူးပါဗျာ၊ အင်း.. ဒီလိုကွန်မန့် များများရရင် ကျနော့်အိမ်တော့ ကြယ်မြင်၊ လမြင် ဖြစ်တော့မှာပဲ၊းD စိတ်ထဲရှိသလို ရေးလိုက်တာက စာဖတ်သူတွေနဲ့ အကြိုက်ချင်း တိုက်ဆိုင်တာ သိရလို့ ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်၊ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ အမြဲလိုလို လာလည်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးစကား ဆိုပါရစေဦး ညီမရေ...၊း)
ဒီတစ်ခါတော့ သိပ်မကြာရအောင် ကြိုးစားပါ့မယ်...၊း)
လိုက်ခဲ့ပါ အစ်မရှင်လေး၊ အတူတူ ဆက်လည်ရအောင်..၊း)
လှချက်ကတော့ လက်ကုန်ပဲ ညီမရဲ့..၊ အခွင့်သာရင် တစ်ခါလောက် သွားလည်ဖို့တောင် ကျနော်က တိုက်တွန်းချင်နေမိတာ...။း))
ခရီးသွားဆောင်းပါးက အစပိုင်းမှာတင် စွဲဆောင်မှုအား အတော် ကောင်းနေပြီ။ လာမယ့် အပိုင်းတွေကို မျှော်တလင့်လင့်ဖြင့် စောင့်နေဆဲပါလို့..။
အပိုင်း ( ၂ ) အတွက် အိပ်ရာထပါတော့ဗျို့လို့ ဖတ်ပြီးပြီးချင်း နှိုးသွားပါတယ်အစ်ကို... :))
thx for the post and pic
Waiting Part2and nice photos...
ဆောရီး ဆရာညီ ငါလည်းအဲဒီအတွက်ရင်ခုန်ခဲ့ရပါ့ကွာ.။
ကိုညီရေ ... ဓါတ်ပုံတွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုပါပဲ ... နောက်ထပ်အပိုင်းလေးကို မျှော်နေပါသည် ... :)
တင်ပြီးပြီးချင်း နေ့ မှာပဲ ဖတ်သွားပေမယ့် ခုမှပဲ ပြန်လာပြောရတော့တယ်...။။ ဒီတစ်ခါတော့ အသစ်လို့လာမအော်တော့ပဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည် တိတ်တိတ်လေး လာလာချောင်းကြည့်ရင်းနဲ့တင်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဖတ်နိုင်လိုက်တယ်...။။ (အသစ်လို့ လာမအော်ဆို....ခရီးကပြန်ရောက်တဲ့ အခါ အရာရာ အသားမကျနိုင်တတ်တာကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်နေပါရဲ့:D :D
ကိုညီရေးလိုက်မှပဲ ကျွန်းကလေးကရော အစားအစာတွေကပါ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ဖြစ်သွားသလိုပါပဲလား....။။
ကိုယ်တိုင်တောင် အာ့ကျွန်းကလေးကို ပြန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။။
ကျွန်းကလေးကို ပျင်းရိငြီးငွေ့ နေသူတွေအတွက် မျက်လုံးကလေးတွေအရောင်လက်.. စိတ်တွေနိုးထလာအာင် ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် ကျွန်းကလေးအဖြစ်ဆက်ဖတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါပြီလေ......။။။။။
ဇာတ်ဆရာရေ သင့်တင့်ရာ တီးလုံးလေးနဲ့မြန်မြန်သာ နောက်တစ်ခန်း..... စလှမ်းလိုက်ပါတော့...။။ :P :P :P
great way to start with... waiting.. :)
အကိုရေ.. တဆင့် မျှဝေပေးတာတောင် ဖတ်ရသူမှာ ရင်တွေခုန်လို့.. အကိုဘယ်လောက် ပျော်ရွင်ကြည်နူးနေမယ် ဆိုတာ ..ခန့်မှန်းမိပါရဲ့အကို .. ပျော်စရာကြီး...:)))
အပိုင်း(၁)မှာပြောခဲ့ သလို ဆက်ပြီးပြောပါရစေတော့....
ကိုညီရေးလိုက်မှပဲ ကျွန်းကလေးကရော အစားအစာတွေကရော နေရာလေးတွေကပါ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ဖြစ်သွားသလိုပါပဲလား....။။
ဇာတ်ဆရာရေ သင့်တင့်ရာ တီးလုံးလေးနဲ့မြန်မြန်သာ နောက်တစ်ခန်း..... ဆက်လှမ်းလိုက်ပါတော့...။။ :P :P :P
ခြင်္သေ့ကျွန်းရဲ့ ညဟာ အိပ်ရာဝင်ဖို့ ဝန်လေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လိုပါပဲ...၊
I like the sentence. LOL..